पर्यटकीयस्थल गुफापोखरी क्षेत्र र तरुनी डाँडा कसरी पुग्ने ? - Saptakoshionline
प्रकाशित मिति: आइतबार, बैशाख २८, २०७७ समय: ५:३२:५८
प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण तीनजुरे, मिल्के जलजले(टिएमजे) क्षेत्र तेह्रथुम, संखुवासभा र ताप्लेजुङको संगमस्थल हो । पर्यटकीय दृश्यकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण यो क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकहरुको निम्ति उपर्युक्त गन्तव्यको रुपमा लिन सकिन्छ । स्थानीयवासीहरुको पहल स्वरुप पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नको लागि टिएमजे पर्यटन प्रवद्र्धन केन्द्रको स्थापना गरेका छन् ।
गुफापोखरी बजारको मनोरम दृश्य
टिएमजे क्षेत्रको पदमार्ग भएर वर्षेनी हजारौँ पर्यटक ओहोरदोहोर गर्छन् । उक्त क्षेत्रका प्राकृतिक सुन्दरता र धार्मिक महत्वका पोखरीको अवलोकन, वसन्त ऋतुमा राताम्मे गुराँसे वन, डाँडाकाँडा र पाखाको दृश्यावलोकनका लागि पर्यटक आउँछन् ।
टिएमजेको सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण पोखरी गुफापोखरी नै हो । पोखरीको छेउमा सानो बस्ती छ । गुफापोखरी नजिकै भएकाले बजारको नाम पनि गुफाबजार राखिएको छ । पर्यटकीयस्थल भएकाले सो बजारमा होटल व्यवसाय सञ्चालन गरी १६ घरधुरी बस्दै आएका छन् । तीन हजार मिटर उचाइमा रहेको सो क्षेत्रमा पहिले प्रशस्त हिउँ पर्ने भएकाले पोखरीमा बाह्रै महिना टिलपिल पानी हुन्थ्यो । अहिले हिउँ पर्न छाडेकाले पानी सुक्दै गएकोमा स्थानीयवासी चैनपुर नगरपालिका–१ का दिनेशचन्द्र खनालले बताए । खनाले बताए अनुसार विगत पाँच वर्षयता हिउँ कम पर्न भएको र पोखरीभित्रको बालुवा निकाल्ने र चारैतिर घुम्ने तथा हेर्ने ठाउँ बनाउने योजना भइरहेको छ ।
प्राकृतिक पोखरी, आकर्षक डाँडाकाँडाका कारण टिएमजे पर्यटकीयस्थल बनेको हो । कञ्चनजंघा हिमालको आधार शिविर र तमोर नदीमा जलयात्रा गर्ने पर्यटकसमेत यही क्षेत्र भएर यात्रा गर्छन् । ती पर्यटकलाई एक दुई दिन गुफापोखरीमै घुम्न पुग्ने गरी पूर्वाधारको निर्माण गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्या बढाउन सकिने खनाल बताउँछन् । अहिले यहाँको पदमार्ग भएर तमोरमा जलयात्रा गर्न आउनेको संख्या बढेको छ ।
संक्षिप्तमा गुफापोखरी :
गुफापोखरी नेपालको संखुवासभा जिल्लाको तत्कालीन नुनढाकी गाविस(हाल चैनपुर नगरपालिका वडा नं. १) मा अवस्थित पर्यटकीय महत्वको स्थान हो । लालीगुराँसको राजधानी भनेर चिनिने धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा र ताप्लेजुङको सङ्गमस्थल तीनजुरे मिल्के जलजले (टीएमजे) क्षेत्रको भौगोलिक निर्देशांक २७.२८५०९८४° उत्तर ८७.५०५७३८७° पूर्वीनिर्देशांक २७.२८५०९८४° उत्तर ८७.५०५७३८७° पूर्व पर्दछ । समुन्द्रीसतहबाट २९०० मिटरको उचाइमा अवस्थित गुफापोखरी क्षेत्रमा चण्डी, धान–च्याब्रुङ, तामाङ सेलो, विझुवा झाँक्री र वालन नाच र पञ्चेबाजाका पनि प्रसिद्ध कमाएको छ ।
गुफापोखरी नेपालको संखुवासभा जिल्ला, नुनढाकी गाविसमा अवस्थित पर्यटकीय महत्वको स्थान हो । लालीगुराँसको राजधानी भनेर चिनिने धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा र ताप्लेजुङको सङ्गमस्थल तीनजुरे मिल्के जलजले (टीएमजे) क्षेत्रमा २९०० मिटरको उचाइमा अवस्थित गुफापोखरी क्षेत्रमा चण्डी, धान(च्याब्रुङ, तामाङ सेलो, विझुवा झाँक्री र वालन नाच र पञ्चेबाजाका लागि पनि चिनिन्छ ।
गुफापोखरीबाट देखिने सूर्योदयको दृश्य
गुफापोखरी कसरी पुग्ने ?
गुफापोखरी जान चाहनेहरुले हवाईमार्ग वा सडक मार्ग दुईमध्ये एकलाई रोज्न सक्नुहुनेछ । सडकमार्गबाट जाने हो भने राजधानीबाट ५३९ किलोमिटर पूर्वमा धरान पुग्न सकिन्छ । विराटनगरसम्म हवाईजहाजमा पनि पुग्न सकिन्छ वा काठमाडौंबाट धरानका लागि बस पनि पाइन्छ । एक दिन धरान बसेर भोलिपल्ट यस वरपरका बराहक्षेत्र, रामधुनी, पिण्डेश्वर, दन्तकाली, शिवजट्टा, पञ्चकन्या, किरातकालीन दरबार, ऐतिहासिक विजयपुर, विष्णुपादुका एक दिनमै घुम्न सकिन्छ ।
धरानबाट चालीस किलोमिटर यात्रा तय गरेपछि कोशीटप्पु पुग्न सकिन्छ । एक दिन कोशीटप्पु घुम्न गए पनि भयो ! अथवा सिधैँ भेडेटार, हिले हुँदै पाँच घण्टा बसमा पुगिन्छ । वसन्तपुर, कञ्चनजङ्घा आधार शिविरको मुख्य प्रवेशद्वारका रुपमा परिचित छ । बसन्तपुरमा प्रशस्तै होटल छन्। होटलमा बस्न नचाहनेले पाल टाँगेर बस्न पनि सक्छन् । र, यहाँबाट थप ६ घण्टाको यात्रा तय गरेपछि गुफापोखरी पुग्न सकिन्छ । यो बाटोमा तोङ्बा, सुकुटी, छुर्पी मात्र होइन, गुराँसको जुससमेत पाइन्छ ।
बसन्तपुरबाट करिब तीन घण्टाको दूरीमा अग्लो पहाड र जङ्गलको बीचमा रहेको चौकीमा तेस्रो बास बस्न सकिन्छ । यहाँका १०÷१५ वटा घरमा खाना खाएपछि सित्तैँमा बास पाइन्छ । तीनजुरे, मिल्के, जलजले क्षेत्र नेपालका पाँच प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य स्थलमध्येको एक हो । १७ सयदेखि ५ हजार मिटरसम्मको उचाइमा रहेको यो क्षेत्र ५५८ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ । नेपालमा पाइने ३२ प्रजातिका गुराँसमध्ये २५ भन्दा बढी यहाँ पाइन्छ। २५० वनस्पति पाइने क्षेत्र र विश्वकै २०० महत्वपूर्ण इकोलोजिकल जोन (परिस्थितिकीय क्षेत्र)को रूपमा समेत यो क्षेत्र रहेको छ । बराह क्षेत्रबाट चीनको तिब्बतसम्म फैलिएको नेपालकै सबभन्दा लामो पहाड शृङ्खला रहेको यो क्षेत्र जैविक विविधता, प्राकृतिक श्रोत तथा सामाजिक(सांस्कृतिक विविधताको खानीको रूपमा रहेको छ।
गुफापोखरीको पोखरीबाट देखिने हिमश्रृंखलाको मनोरम दृश्य
चौकीबाट श्रीमाने, पाँचपोखरी, लामपोखरी हुँदै निकै चिसो बाटो भएर सुस्त–सुस्त अगाडि बढ्नु पर्छ। यहाँ चैतमा पनि पनि हिउँ परिरहेको हुनसक्छ । पोखरीमा आफ्नै छायाँ हेरेर रमाउन, अँगालोभरी गुराँस बोकेर तस्बिर खिच्न, खुल्ला चौरमा लमतन्न सुतेर आकाशतिर हेर्दै थकाइ मार्न यो सबैभन्दा राम्रो मौका हुनसक्छ ।
पाँचपोखरी, लामपोखरी नाघेर अग्लो डाँडैडाँडा पूर्वतिर लाग्दा माथिबाटै देखिन्छ लमतन्न परेको मनोरम गुफापोखरी। हिमालको छायाँ देखिने बजारसँगैको पोखरी र अलिपर मेन्छ्याम डाँडाको फेदीमा रहेको गुफालाई जोडेर यो ठाउँको नाम गुफापोखरी रहन गएको हो । मेन्छ्याम (लिम्बू भाषामा तरुनीे) डाँडा माथिबाट पनि हिमशृङ्खला देखिन्छ। शेर्पा जातिको बाहुल्य रहेको गुफापोखरी बजारमा राम्रो खानपिन र आनन्दको बाससहितका आधा दर्जन होटल छन् । होटलमा रु.३०० मा कोठा र रु.२५० देखि ३०० मा खाना पाइन्छ ।
गुफापोखरीमा बिहान चौरीका घण्टीको आवाजले पर्यटकहरुलाई ब्यूँझाउँछ भने चौरीको दूध, घिउ र छुर्पी खाँदै पर्यटकहरु रम्ने गर्दछन् । पाँचबजे नै उठेर आधा घण्टा टाढाको तरुनी डाँडा चढेर पूर्वको सूर्याेदय हेरेपछि उत्तरतिरका हिमाल टल्किँदै सामुन्नेमा आइपुग्छन् ।